ठूलो संख्यामा विज्ञापन खोल्दै लोकसेवा – Everest Dainik
ठूलो संख्यामा विज्ञापन खोल्दै लोकसेवा
काठमाडौं, वैशाख २८ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गर्ने तयारी थालेको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रशासनलगायतका विभिन्न सेवा समूहका पदमा लोकसेवाले भर्नाको गृहकार्य थालेको हो ।
आयोगले जेठको दोस्रो सातासम्म विभिन्न तहमा विज्ञापन गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार आगामी ६ महिनाभित्रै स्थानीय तहका विभिन्न पदमा हजारौं कर्मचारी सिफारिस नै गर्नेगरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको हो । लोकसेवाले स्थानीय स्तरका तह ४ देखि ९ सम्मको पदमा विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले अझै केही स्थानीय तहबाट रिक्त पदको विवरण आउने क्रम रहेकाले केही पद थप गरेर पठाउन सकिने जानकारी आयोगलाई दिएको छ । सोहीअनुसार अयोगले थप भएका पदलाई समेत समेटेर विज्ञापन गर्ने तयारीमा जुटेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
कञ्चनपुरको डोकेबजारमा तनाव, मदिरामा लठ्ठ प्रहरीले जनप्रतिनिधि कुटे
पुरुषको कपाल झर्नुको कारण जान्नुहोस्, अपनाउनुहोस् रोकथामका उपाय
८ हजार कर्मचारीको नयाँ भर्ना, जेठ १५ मा विज्ञापन खुल्ने पक्का
आजदेखि प्रधानमन्त्री कप, उद्घाटन खेलमा को–को भिड्दै?
प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामा अनियमितता गर्ने विरुद्ध अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर
दाइजो नपाएपछि बेहुला मध्यरात मण्डप छाडेर हिँडे !
काभ्रेमा नसर्ने रोगका बिरामीको सँख्या बढ्यो